Tajikistana : Fitantanana am-patrany ny herinaratra (delestazy) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2018 12:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, 简体中文, 繁體中文, English
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Febroary 2009)
Mbola tsy ela akory, faritra maro tao Tajikistana no tsy nanana afa-tsy herinaratra kely dia kely : ora enina isanandro ihany. Fa mba farafaharatsiny aloha nandeha tsara ny famahanana herinaratra nandritra izay ora enina izay. Ankehitriny, ratsy noho izany ny toe-javatra misy.
Notapahan'i Tiorkmenistana ny famatsiana herinaratra ho any Tajikistana tany am-piandohan'ny taona 2009, noho ny tsy fifanarahana teo amin'ity farany sy i Ozbekistana teo amin'ny vidin'ny saram-pampitàna herinaratra. Manazava [amin'ny teny anglisy] ny anton'ilay fifandirana teo amin'ireo fanjakana roa ireo ny neweurasia :
Mangataka 10 % amin'ireo 0.03 $ isaky ny kilowatt alohan'i Tajikistana amin'ireo Torkmenistana i Ozbekistana. Araka ny fifanarahana, tokony nanome herinaratra 1.3 miliara kilowatt ho an'i Tajikistana tamin'ny volana desambra 2008 sy janoary 2009 ity fanjakana manamorona ny ranomasina Kaspiana ity. Natsahatr'i Torkmenistana ny famatsiany herinaratra nandritra ireo fifampiraharahana teo amin'ny Tajiks sy Ozbeks mikasika ilay fitaterana. Noho ny tsy fisian'ny fifanarahana, tsy niverina ny famatsiana.
Noho izany, nanambara ny Barqi Tojik, izay manana ny ampihimamba amin'ny fizarana ny herinaratra ao Tajikistana fa hiaina fitantanana am-patrany ny herinaratra (delestazy) manomboka ny 27 janoary 2009 ireo tanàna lehibe rehetra, ao anatin'izany i Dochanbe renivohitra. Somary nandona ny firenena ilay vaovao, indrindra fa tamin'ny fararano farany teo, nampanantena ny vahoaka tao amin'ny renivohitra sy ireo tanàna lehibe maro hafa ny Filoha Rahmon hoe tsy hisy fitantanana am-patrany ny herinaratra .
Mamaritra ny fandaminana ankapobeny an'ilay drafitra fitantanana am-patrany ho an'i Dochanbe ny neweurasia :
Manomboka izao, tsy hahazo herinaratra afa-tsy 15 ora isanandro irery ihany i Dochanbe. Tsy mbola voapetraka ny drafitra fa efa tena azo antoka fa tsy hahazo herinaratra ny tanàna, mandritra ny 6 ora ny alina (11 ora alina hatramin'ny 5 ora maraina) ary 3 ora amin'ny antoandro.
Izany no nambaran'ny ankamaroan'ny masoivohom-baovao. Kanefa, hatramin'izao aloha, mbola mahazo herinaratra foana i Dochanbé ; mety nanapa-kevitra ny hampiasa ny rano sisa tavela ao amin'ny farihy fitazonana ao amin'ny fefilohan'i Norek mba hamokarana herinaratra angamba ny Barki Tojik.
Natao ho an'ireo mponina eny amin'ny tanànan-dehibe ilay fanapahankevitra voalohany noraisin'i Rahmon: be efitra kokoa any amin'ireo tranobe sarotra hafanaina mandritra ny ririnina any amin'ny tanàndehibe. Raha oharina amin'izany, mampiasa fomba hafa ho fanafanàna ireo trano any ambanivohitra, toy ny hazo, ny saribao, sns. Nihevitra ny Filoha fa ho ampy amin'ity ririnina ity ny herinaratr'i Torkmenistana. Fa mivoatra haingana ny toe-javatra eo amin'ny tsenan'ny angovo ao Azia Afovoany.
Manaraka ireo fivoarana farany mikasika ity raharaha ity ao amin'ny Registan i Michael Hancock; manontany tena izy hoe inona marina no tena mitranga amin'izao fotoana izao :
Notapahan'i Ozbekistan ny gazy ho an'i Tajikistana, ary ankehitriny, tsy mandefa herinaratra intsony i Torkmenistana. Raha amiko manokana, tena hitako toy ny sarotra takarina ireo foto-drafitrasan'i Azia Afovoany. Noho ny Firaisana Sovietika, mbola nifandray ireo repoblika ireo tany am-piandohany. Mety mba hanatratrana ny tanjona sovietika amin'ny firaisana sy ny fihavanana angamba izany, fa ankehitriny, mahatonga ny toe-javatra ho sarotra kokoa izany rehefa manapa-kevitra ny hanapaka ny famatsiana ny hafa ny firenena sasany.
Nanoratra lahatsoratra [tamin'ny teny anglisy] tao amin'ny The Global Buzz i Matt Stone izay anazavana fa mihevitra izy hoe ireo zava-mitranga ao Azia Afovoany ireo dia ampahany iray fotsiny amina fifanandrinana goavana eo amin'i Rosia sy ny Andrefana. Araka ny heviny, nanao sonia fifanarahana vaovao fividianana entona teo amin'i Kazakhstan, Torkmenistana sy i Ozbekistana i Rosia, tamin'ny ”vidiny eoropeana”, ambony kokoa noho ny taloha, mba handresena lahatra ireo fanjakana mpanondrana angovo ao Azia Afovoany hanatevina laharana ilay tetikasa Nabucco, fantsona fitaterana solika (oléoduc) .
Tsy miankina amin'ny hamarinan'ny fandinihana nataon'i Matt Stone, mazava be fa nisy fiantraikany maro ny fanapahankevitr'i Rosia : nanapa-kevitra ny hampiakatra ny vidin'ny entona amidiny amin'i Tajikistana sy Kirghizistana i Ozbekistana, avy amin'ny 145 $ ka hatramin'ny 240 $ tamin'ity taona ity. Adikan'i Matt Stone [amin'ny teny anglisy] ihany koa ny fanapahankevitr'i Ozbekistana sy Torkmenistana hanapaka miaraka ny entona sy ny herinaratra ho toy ny fampitandremana nalefa tany amin'i Tajikistana :
I Tajikistana sy i Kirghizistana no loharanon'ny ampahany lehibe indrindra amin'ny rano fisotro madio sy ny fitarihan-drano ao Azia Afovoany. Tena mila rano avy amin'ireo tendrombohitra avo ao Tajikistana sy Kirghizistana mba hitarihana rano amin'ireo tany midadasika voavoly landihazo, izay vokatra lehibe fanondrana ho an'iretsy fanjakana roa voalohany. Mety ho fomba iray andefasana hafatra ho any Dochanbe io, hoe ananan-dry zareo ny fitaovana ahafahana manindry, raha toa Tajikistana ka mikasa hanidy ny paompin-drano manondraka ny any ambany.
Azo lazaina ho tsy misy herinaratra na entona i Tajikistana ankehitriny. Mampidi-doza ny fahamarinan-toerana ara-tsosialy, ara-politika sy ara-toekarena manerana ny firenena izany. Raha toa ka tsy miverina haingana ny fanafarana herinaratra avy any Torkimenistana, mety hiaina toe-piainana mahatsiravina momba ny maha-olombelona i Tajikistan.
Lahatsoratra nozaraina tao amin'ny neweurasia ihany koa [amin'ny teny anglisy].